5 daqiiqado kalsooni loogu talagalay GeoCivil - Geofumadas
5 daqiiqado kalsooni ah oo loogu talagalay GeoCivil
Oktoobar, 2011 AutoCAD-AutoDesk, aragti ugu horeysay
GeoCivil waa blog xiiso leh oo loo isticmaalo qalabka CAD / GIS ee aagga dhismaha madaniga. Qoraaga, qof ka soo jeeda El Salvador waa tusaal wanaagsan oo ku saabsan jihaynta in fasalada caadiga ah ee ay u socdeen -casi- bulshooyinka barashada internetka; Shaki la'aan, waa guul muhiim u ah xiriirinta caalamiga ah waa meel fiican oo laga bilaabi karo dimuqraadiyada aqoonta.
GeoCivil waxay ku adkaataa isticmaalka AutoDesk Civil 3D oo lagu sheego maqaalo badan, labadaba iyo xirfado labadaba wax qabadkooda. Intaa waxaa dheer in barnaamijyada dhameystiran ee AutoDesk ee sameeya ama sameeya waxyaabo la mid ah sida Land Desktop iyo AutoCAD Map.
Waxaan ka tagayaa seddex xiriiriye si aad qaniinto, u tagto oo ku dar akhristahaaga cuntada.
Sida loo maamulo habka caadiga ah ee loo yaqaan AutoCAD
Maqaalkani wuxuu muujinayaa sida loo xareeyo amar laga dhigo AutoLisp, iyadoo la adeegsanayo jadwalka qoraagu uu sameeyay si loo xisaabiyo oo loo calaamadiyo aagagga aan khasab ahayn in la xiro xadka.
Download xogta GPS si AutoCAD
Tani waxay sharraxaysaa sida loo soo dejiyo xogta laga soo galo GPS EttaC to AutoCAD, adoo isticmaalaya barnaamijka MapSource.
Qaybi qorshe aan caadi ahayn oo leh AutoDesk Civil 3D
Halkan waxa uu nagu soo dejiyaa fiidiyo ah sida loo kala qaybiyo sawirka leh qaabka "L" ixtiraamaya aag gaar ah oo badan. Jawaab xiiso leh oo ku salaysan su'aal ka timid bulshada Augi, markii aan noolaa.
Si aad u sarayso, halkan laba maqaal oo dheeraad ah oo ku saabsan sida loo xakameynayo xogta shaxanka ee 3D:
Abuur ka samee faylka dhibicda
Link Survey, si ay u soo dejiyaan macluumaadka qalabka topographic si AutoCAD
Waxaan ka faa'iideysanayaa gaadiidka Isniinta, taas oo habka uu yahay mid aad u wanaagsan, si kor loogu qaado hindisahan iyo ka tago liiska qoraallada aan ku talinayo. Haddii ay rabaan waa inay bartaan qof ka taliya Civil3D, iyada oo shaki la'aan GeoCivil waa meesha.
Ku dar GeoCivil Google Google Reader
Post Previous«Previous Geomap iyo isku xirnaanta Khariidadaha Google
Post Next Habka cusub ee wargeysyada InfoGEO iyo InfoGNSSNext »
2 Jawaab ah "5 daqiiqo oo lagu kalsoon yahay GeoCivil"
MARINO BAUTISTA HINOSTROZA isagu wuxuu leeyahay:
hello gacaliyahayga waxaan inta badan la shaqeeyaa AUTODESK CIVIL 3D oo waxaan hayaa xog aan ka helay meel aan rabo inaan joreference u galo markaa muuqaalku waa mid aad u dhalaalaya, waxaa jiri doona amar si aad u hawlgaliso isla markaana leh caddeyn weyn oo ku saabsan GEOLOCATION of rayidka 3D.
KU SI FIICAN
Hugo isagu wuxuu leeyahay:
Waad mahadsantihiin qaali ahow, waxaan ahay qofka ku haya geocivil, waana sharaf aad u qorto maqaalkan ku saabsan blogkayga; dhab ahaantii geofumed ayaa ii ahaa ilo iyo ilo, waxaanan kula talinayaa inta badan.